Trulia Rent Apartments & Homes 8.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.2.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Trulia Rent Apartments & Homes
Trulia Rent Apartments & Homes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Trulia သင်အသက်ရှင်ဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်တဲ့နေရာရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျတကယ့်တစ်ဦးနေအိမ်နှင့်တစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းတွင်နေထိုင်လိုဘာများအတွက်ခံစားပေးရငှားရမ်းဂုဏ်သတ္တိများ ပတ်သက်. ပုံမှန်အချက်အလက်များထက်ကျော်လွန်သွားပါ။
ကျနော်တို့ဖြောင့်သငျသညျ (မပိုငှားရမ်းနေအိမ်များ & တိုက်ခန်းများ၏လိပ်ခေါင်းမှတဆင့်တူးဖော်ခြင်း) လိုအပ်သည့်အချက်အလက်မှသငျသညျရ။ သငျသညျအထဲကလက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒါနှငျ့သငျ, သငျသညျအကွောငျးကိုဂရုမစိုက်သည့်ငှားရမ်းခြင်းအပေါ်ချက်ချင်း updates များကိုရရှိနိုင်သည်။
NEW Trulia အိမ်နီးချင်း -! ရပ်ကွက်အတွင်းသတင်းအချက်အလက်, အားလုံးတစ်နေရာတည်းတွင်
•လူအအားလပ်ရက်များအတွက်၎င်းတို့၏နေအိမ်များအလှဆင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုညဥ့်မှာတစ်ဦးတည်းလုံခြုံလမ်းလျှောက်ခံစားရရှိမရှိကနေအထိ, အဒေသခံများကပြောပါအဘယျသို့အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူရပ်ကွက်၏စစ်မှန်သောခံစား Get
•ရာဇဝတ်မှု, ကျောင်းများ, စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း, သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အသွားအပြန်အပါအဝင် 34 ရပ်ကွက်အတွင်းအပူထပ်မြေပုံ Browse
• NEW! သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောကျောင်းခရိုင်အတွင်းရှိငှားဖို့အိမ်တွေရှာရန်
•တောင်းဆိုမှု 1-Click: ဆက်သွယ်ရန်အိမ်ရှင်နှင့်ငှားရမ်းပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံ-ကလွယ်ကူပါတယ်နှင့်အတူကြည့်ထူထောင်ရန်။
•လက်ငင်းမွမ်းမံမှုများ: အသစ်တစ်ခုကိုအငှားစာရင်းသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးကိုက်ညီသည့်အခါ Real-time တွန်းအားပေးအသိပေးချက်များကိုရယူပါ။ သင်ကစျေးကွက်အပေါ်ကြွလာသောအခါပြီးပြည့်စုံသောအငှားပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှမယ်!
•ဒေသခံများကပြောပါအဘယျသို့: ဒေသခံတွေ: တစ်ရပ်ကွက်အတွင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသောကားပါကင်, အဘယ်မှာလူတွေကိုအကောင်းဆုံးဧရိယာကိုသိသောလူစုထဲကစျေးဝယ်စား-အားလုံးလိုရှိမယ့်လျှင်လူများ, ညအချိန်တွင်တယောက်တည်းသာလမ်းလျှောက်လုံခြုံဟုခံစားရခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ကိုချစ်ဖို့ဘာကိုလေ့လာပါ!
• 34 Interactive မှ Maps ကို: ထိုကဲ့သို့သောရာဇဝတ်မှု, ကျောင်းများ, စားသောက်ဆိုင်များ, တတ်နိုင်နှင့်အသွားအပြန်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော overlay ကိုမြေပုံနှင့်အတူရပ်ကွက်အတွင်းတစ်ဦးပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာကိုရယူပါ။ မည်သည့်ဧရိယာများအတွက်ကျောင်းကို ratings နှင့်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်တူသောအရာတို့ကိုရယူပါ။ ပုံမှန်, ဂြိုလ်တုသို့မဟုတ်မြေပြင်အနေအထား mode မှာမဆိုမြေပုံဧရိယာရှုမြင်ကြသည်။ Trulia သင် Craigslist သို့မဟုတ် Airbnb တူသောအခြားမည်သည့် site ကိုထက်အိမ်ရှေ့တံခါးအပြင်ဘက်ရဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးသည်။
•ထူးထူးအထွေထွေရှိငြား Listings: အိမ်တအိမ်, တိုက်ခန်း, ဒါမှမဟုတ်ငှား townhome-ပင်အခန်းပေါင်းကဲ့သို့အငှားအိမ်ခြံမြေမဆိုအမျိုးအစားရှာဖွေပါ။
• Flexible ရှာရန်: အသုံးပြုမှု filter များလျင်မြန်စွာတည်နေရာ, စျေးနှုန်း, အိပ်ရာနှင့်ဗတ်အရေအတွက်နှင့်ပိုပြီးအားဖြင့်ငှားရမ်းမှုများရှာဖွေ။ SF အတွက်လောင်စာမီးနှင့်အတူ apts ကြည့်ဖို့လိုပါသလား? LA ကတစ်ဦးခွေး-ဖော်ရွေခနျးငှားရမ်းရန်ရှာဖွေနေပါသလား ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ပါ။
•ငှားအနီးဖြတ်သန်း (မြို့ကြီးများကို select): တစ်ဦးအကူးအပြောင်းရှာဖွေရေး filter ကို Set များနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျ San Francisco မှာ BART အနီးအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သည်ဖြစ်စေမယ့်အကူးအပြောင်းဘူတာရုံမှ walkable ရဲ့တစ်ဦးနေအိမ်သည်, နယူးယောက်မြေအောက်ရထား, ဒါမှမဟုတ်ချီကာဂိုရဲ့ L ကိုရထားရှာဖွေတွေ့ရှိကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ယနေ့ Trulia အငှားဌာနများ app ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင်အသက်ရှင်ဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်တဲ့နေရာရှာဖွေတွေ့ရှိ!
မှတ်ချက်များ, အကြံပြုချက်များ, တုံ့ပြန်ချက်? အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး: android_for_rent@trulia.com
မှတ်ချက်: Trulia ဤအချိန်တွင်မှသာ USA တွင်ဂုဏ်သတ္တိများအဘို့ဖြစ်၏
Trulia Rent Apartments & Homes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Trulia Rent Apartments & Homes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Trulia Rent Apartments & Homes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Trulia Rent Apartments & Homes အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.79k 16.47M
Trulia Rent Apartments & Homes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Trulia Rent Apartments & Homes အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.trulia.com/privacy/
Release date: 2019-08-16 06:18:09
လက်မှတ် SHA1: 4D:11:03:C6:04:2F:F9:56:57:6C:75:B0:3F:C1:64:0C:FF:8A:65:DE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Greg Roberts
အဖွဲ့အစည်း (O): Trulia Inc
Trulia Rent Apartments & Homes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ